Universal Online TV | कति कमाउछन अनुष्का र विराट ? कति कमाउछन अनुष्का र विराट ?
कति कमाउछन अनुष्का र विराट ?
भारतिय क्रिकेटर विराट कोहली र चर्चित अभिनेत्री अनुष्का शर्माको इटालीमा विवाह भएको छ । क्रिकेटमा आफ्नो इतिहास बनाएका र चलचित्रबाट दर्शकको मन जित्न सफल यी जोडी सम्पती कति भन्ने कुराको जानकारी यस प्रकार रहेको छ ।
एक वेबसाइटका अनुसार विराटको कमाई करिब ३ सय ९० करोड छ । उनि वान डे म्याचको ३ लाख रुपैया लिन्छन भने १ टेष्ट म्याच खेलेको ५ लाख लिन्छन । उनको सिजनको कमाइ १४ करोड हुन्छ । उनको व्यक्तिगत घर १८ करोडको छ । विराट सँग ६ लक्जरी कार रहेका छन् जसको मूल्य ९ करोड हुन्छ ।
अनुष्का भने एक चलचित्रको लागि ५ करोड लिने गर्दछिन् । त्यस्तै विज्ञापनबाट ४ करोड जति कमाउछिन । अनुष्काको व्यक्तिगत घर करिव ३६ करोडको छ भने उनि सँग ४ लक्जरी कार छन् । जसको मूलय ५ करोड हुन आउछ । उनको हालसम्मको कूल सम्पती २ सय २० करोड छ ।